सिटिजन्स बैंकले तिनाउ मिसनलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर
पुस २२, काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सिटिजन्स बैंकको मुख्य कार्यालय नारायणहिटी पथमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तिम सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौता पत्रमा सिटिजन्स बैंकको तर्फबाट सञ्चालक प्रवलजंग पाण्डे र तिनाउ मिसनका तर्फबाट सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद ओझाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली २०७३ बमोजिम सिटिजन्स बैंकले बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने गरी अन्तिम सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकका शेयरधनीले १०० कित्ता शेयर बराबर सिटिजन्स बैंकको ९६ कित्ता शेयर पाउनेछन् । सिटिजन्स बैंकको हालको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा तिनाउ मिसनलाई प्राप्ति गरेपछि उक्त पूँजी रू. ११ अर्ब ६६ करोड पुग्नेछ ।
दुवै कम्पनीबीच गत कार्तिक १ गते प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई ओटै कम्पनीले आ-आफ्नो विशेष साधारण सभाबाट प्राप्ति सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पछि एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् ।